सिद्धार्थ मल्होत्रा र ज्याकलिन फर्नान्डेज लिभ इन रिलेसनमा ?
बैशाख २५, २०७५
काठमाडौं, २५ वैशाख – बलिउडका कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा र ज्याकलिन फर्नान्डिज अहिले डेटिङ गरिरहेका छन् । अब उनीहरूको प्रेम एक कदम अघि बढेको जस्तो देखिन्छ ।
विभिन्न समाचारहरूका अनुसार, सिद्धार्थ र ज्याकलिन एकैसाथ बस्नका लागि फ्ल्याट खोजिरहेका छन् । उनीहरू मुम्बईको जुहु इलाकामा लिभइन रिलेसनमा बस्नका लागि फ्ल्याट खोजिरहेका हुन् । अहिले उनीहरू बान्द्रामा फरक फरक ठाउँमा बस्छन् ।
ज्याकलिनलाई सिद्धार्थको घरनजिक धेरैचोटि देखिएको छ । दुवैले एकअर्कालाई राम्रो साथी मात्र भने पनि उनीहरूको नयाँ योजना देख्दा यो गफ मात्र हो भन्ने लाग्छ ।
सिद्धार्थको आगामी फिल्म कारगिल युद्धको नायक रहेका क्याप्टेन विक्रम बत्राको जीवनी हो । ज्याकलिन भने रेस ३ मा सलमान खानका साथ देखिनेछिन् ।
बैशाख २५, २०७५ मा प्रकाशित
बाहुबलीले अनुष्कालाई दिए महंगो कार
कपिल शर्मा पतन हुन लागेका हुन् ?
पैसा चोरेको भन्दै अमिताभले जब चड्कन खाए ...
पाँच नायकः कुनै बेला नामै नाम, अहिले गुमनाम
बाबा रामदेबसँग विवाह गर्न चाहन्थिन् यी हिरोइन्
शो बन्द भयो तर बानी सुध्रिएन कपिल शर्माको, घन्टौं कुराए अक्षयलाई
नुवाकोटमा फरार व्यक्ति मृत्त भेटिए नुवाकोट–चोरीमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको समयमा गत पुस ४ गते त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका मैते तामाङ आज मृतावस्थामा भेट्टिएका छन् । रसुवाको उत्तरगया गाउँ...
यस्तो देखियो यसपटकको गोरु जुधाई प्रतिस्पर्धा [फोटोफिचर]
अनशनरत डा केसीलाई ‘एन्टिबायोटिक’
प्रिन्स दाहाललाई अन्तराष्ट्रिय ब्याडमिन्टन उपाधी
शारीरिक सुगठन च्याम्पियनसिपका स्वर्ण विजेता महेश्वर सम्मानित
६ वर्षदेखि फरार रहेका लागू औषध मुद्दाका फरार व्यक्ति पक्राउ
कांग्रेसमा किन मर्दैछ बीपीको विचार ?
शक्ति सन्तुलन र नेपालमाथिको सम्भावित भूराजनीतिक संकट
- कुन्दनकुमार झा पूरा पढ्नुहोस
चीन घेर्ने अमेरिकी कानून, भारतीय खुशियाली र नेपालको चिन्ता
Nov. 28, 2018, 12:44 p.m. शीतल निवासको सन्दर्भ पूरा पढ्नुहोस